healthykhabar.com – Health News Portal of Nepal – healthykhabar.com
डा. सदिना श्रेष्ठको फोक्सोको क्यान्सरबाट निधन
काठमाडौं,८ असार । चितवनस्थित बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत डा. सदिना श्रेष्ठको फोक्सोको क्यान्सर रोगका कारण निधन भएको छ। डा. श्रेष्ठको मंगलबार साझ ६ बजे उपचारका क्रममा निधन भएको हो। डा श्रेष्ठ अस्पतालमा अंको प्याथोलोजिष्टको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । श्रेष्ठ १५ वर्षभन्दा अघिदेखि अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो ।
दुई हजार ४२१ जनामा कोरोना संक्रमण,५२ को मृत्यु
काठमाडौं,९ असार । बुधबार देशभर दुइ हजार ४२१ जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको १२ हजार ४१४ जनाको पिसिआर र एन्टीजेन परीक्षणमा २ हजार ४२१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार ७ हजार ४६१ जना पिअिसार परीक्षण गर्दा १ हजार ५११ र ४ हजार ९५३ जनाको एन्टीजेन परीक्षण गर्दा ९१० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। योसँगै नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या ५० हजार ५२० पुगेको छ। आज…
गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवमा डा. विनोदविन्दु शर्मा
पोखरा, ८ असार । गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिवमा डा विनोद विन्दु शर्मा नियुक्त हुनुभएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै डा.शर्मालाई गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिएको हो । डा. शर्मा एघारौँ तहका प्रमुख स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक हुनुहुन्छ । शर्माले बुधबारबाट नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्नुहुनेछ । यसअििघ डा. शर्मा प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशको निर्देशकको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो ।
निजी सवारीमा जोर बिजोरपछि सडकमा चाप
काठमाडौँ, ८ असार । आजबाट सडकमा सवारी चाप बढेको छ । सरकारले उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप खुकुलो पार्दै निजी सवारी साधानमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिएपछि सवारीसाधनको चाप बढेको हो। उपत्यकाका तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बार तोकेर विभिन्न पसल सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइएकाे छ । उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर)का प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित आइतबार बसेको संयुक्त बैठकले उक्त आदेश जारी गरेको हो । आजदेखि असार १४ गते राति १२ बजेसम्म उक्त आदेश लागू हुनेछ । यसपटक साना सवारी साधन (कार…
काठमाडौं,९ असार । बुधबार देशभर दुइ हजार ४२१ जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको १२ हजार ४१४ जनाको पिसिआर र एन्टीजेन परीक्षणमा २ हजार ४२१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार ७ हजार ४६१ जना पिअिसार परीक्षण गर्दा १ हजार ५११ र ४ हजार ९५३ जनाको एन्टीजेन परीक्षण गर्दा ९१० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। योसँगै नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या ५० हजार ५२० पुगेको छ। आज देशभर ३ हजार ५५८ जना संक्रमित निको भई डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म ५ लाख ६८ हजार ४४० जना संक्रमित निको भइसकेका छन्। पछिल्लो २४ घण्टामा ५२ जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। त्यसबाहेक अन्य समयमा २९ जनाको मृत्यु पनि कोरोना संक्रमणको कारण भएको पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। योसँगै हालसम्म ८ हजार ८९४ जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ।
काठमाडौं, १० असार । युट्युबमा भाइरल बनेकी महिला सन्तोषी सुब्बाको शव दक्षिणकालीमा फेला परेको छ । प्रहरीले सुब्बाको हत्या भएको हुन सक्ने आशङ्का गरेको छ । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले सुब्बाको शव बुधबार दक्षिणकालीमा फेला परेको बताउनुभयो । सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न आवाज निकालेर सन्तोषी…
नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोपको परीक्षण गर्न बाटाे खुला
काठमाडौं, असार ८ गते । नेपालमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको परीक्षण गर्न बाटो खुलेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको वैठकले नेपालमाा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको परीक्षण गर्ने बाटो खुला गरिदिएको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशमा उत्पादन /परीक्षण/अध्ययन भैरहेको खोपलाई नेपालमा पनि परीक्षण गर्न सक्ने सैद्धान्तिक सहमति दिएको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परीषद्का…
पोखरा, ८ असार । गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिवमा डा विनोद विन्दु शर्मा नियुक्त हुनुभएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै डा.शर्मालाई गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिएको हो । डा. शर्मा एघारौँ तहका प्रमुख स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक हुनुहुन्छ । शर्माले…
चार हजार ५२२ संक्रमित,४१ जनाको मृत्यु
काठमाडौं,८ असार । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर चार हजार ५२२ जना व्यक्ति कोरोना संक्रमित भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा १६ हजार ९१३ जनाको पिसिआर र एन्टीजेट परीक्षण गर्दा ४ हजार ५२२ जनामा कोराना पुष्टि भएको हो। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या छ लाख २६ हजार…
स्वास्थ्य मन्त्री शेरबहादुर तामाङ पदमुक्त
काठमाडौं,८ असार । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङ पदमुक्त हुनुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसंगै तामाङको मन्त्री पद गुमेको हो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। यो आदेशसँगै…
ललितपुर महानगरपालिकाले भोलि कोभिसिल्ड खोपको दोश्रो मात्रा दिने
काठमाडौं, ८ असार । ललितपुर महानगरपालिकाले बुधबारदेखि ७७ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको कोभिसिल्ड खोप लगाउने भएको छ । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश अर्यालले महानगरीय खोप समन्वय समितिको सोमबार बसेको बैठकले कोभिसिल्ड खोपको पहिलो मात्रा लगाएका ७७ वर्षमाथिका नागरिकलाई दोस्रो मात्राको खोप लगाउने निर्णय गरेको बताउनुभयो । महानगरले ७७ वर्ष माथिका…
डाक्टर पढ्दै गरेकी भट्टको निधन
एक नर्स जसले संसारको ध्यान तानिरहेकीछन् (फोटो फिचर सहित)
स्कुटर दुर्घटनामा अनमी गंगा रानाको मृत्यु
१९ वर्षकी भएँ योनिमा लिङ्ग छिर्दैन अनि दुख्छ ?
एकैदिन १३९ जना संक्रमितको मृत्यु, आज मृत्यु हुने संख्या हालसम्मकै अत्यधिक
वीर अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी कालुसिंहको निधन
टिचिङ र वीरका अक्सिजन प्लान्ट तातोपानीमै रोकियो, लिपिङ पुल अवरुद्ध
काठमाडौँ, असार ५ गते । लगातारको वर्षाका कारण सिन्धुपाल्चोकको लिपिङ पुलसँगैको सडक भाँसिदा त्रिवि शिक्षण, वीर र नर्भिक अस्पतालका लागि ल्याइएको अक्सिजन प्लान्ट तातोपानीमै रोकिएको छ । मितेरी पुलभन्दा करीब २०० मिटर तल रहेको लिपिङ पुलसँगैको सडक भासिएकाले अक्सिजन प्लान्ट बोकेको कन्टेनर काठमाडौँ ल्याउन नसकिएको आयातकर्ता विध म्यानेजमेन्टले जनाएको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहर बढेसँगै राजधानीका ठूला अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव भएपछि चीनबाट अक्सिजन प्लान्ट खरीद गरिएको थियो । चीनबाट आयात गरिएको अक्सिजन प्लान्ट सडक अवरुद्ध हुँदा तातोपानी क्षेत्रमै रोकिएपछि आयातकर्ता विध म्यानेजमेन्टले ‘एयर लिफ्टिङ’ मार्फत ल्याउन सहजीकरणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ । विधले स्वास्थ्य मन्त्रालयललाई पत्र लेख्दै एयर लिफ्टिङका लागि सेनाको एमआई १७ हेलिकोप्टरको व्यवस्था गरिदिन भनेको छ । “लिपिङ भन्सार यार्डबाट एयर लिफ्टिङ गर्न सकिने सम्भावना छ”, विध म्यानेजमेन्टका निर्देशक बीके भण्डारीले भन्नुभयो, “त्यहाँबाट करीब ५०० मिटर दूरीसम्म एयर लिफ्टिङका लागि सहजीकरण गरिदन अनुरोध गरिएको हो ।” सानो क्षमताको हेलिकप्टरले उक्त सामग्री बोक्न नसक्ने भएकाले सेनाकै हेलिकोप्टरका लागि सहजीकरण गरिदिन मन्त्रालयसमक्ष आग्रह गरिएको निर्देशक भण्डारीले बताउनुभयो । कोभिड–१९ युनिफाइड अस्पतालका प्रमुख प्राडा जागेश्वर गौतमले सडक अवरुद्ध भएर रोकिएका अक्सिजन प्लान्ट ल्याउन सम्बन्धित निकायसँग छलफल…
काठमाडौं, ८ असार । ललितपुर महानगरपालिकाले बुधबारदेखि ७७ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको कोभिसिल्ड खोप लगाउने भएको छ । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश अर्यालले महानगरीय खोप समन्वय समितिको सोमबार बसेको बैठकले कोभिसिल्ड खोपको पहिलो मात्रा लगाएका ७७ वर्षमाथिका नागरिकलाई दोस्रो मात्राको खोप लगाउने निर्णय गरेको बताउनुभयो । महानगरले ७७ वर्ष माथिका दुई हजार २२० जना कोभिसिल्डको दोस्रो मात्राको खोप दिन लागेको हो । खोप बुधबार बिहान १० देखि ४ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ । यसका लागि महानगरपालिकाले आठ वटा खोप केन्द्र तोकेको…
स्वस्थ जिवनका लागि नियमित योग गरौँ
लायन्स क्लबद्धारा लिखु गाउँपालिकालाई स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग
नेपालका स्वास्थ्यकर्मी हिरो हुन्ः विश्व स्वास्थ्य संगठन
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) महानिर्देशक डा. टेड्रोस एड्हानोम गेहब्रेयसले मुस्ताङमा स्वास्थ्यकर्मीले कोरोनाविरुद्धको खोप खोला तारिरहेको भिडिओ ट्विट गर्दै स्वास्थ्यकर्मीको प्रशंसा गरेका छन्। असार १ गते मुस्ताङको छापताङ् खोला बढेपछि स्वास्थ्यकर्मीले पाइपको सहारले ‘भ्याक्सिन क्यारिअर’ तारेको भिडियो सामाजिक संजालमा भाइरल भएको थियो। उक्त भिडिओलाई महानिर्देशक टेड्रोसले ट्विट गर्दै स्वास्थ्यकर्मीले यो साहसका साथ जीवनरक्षाका लागि काम गरिरहेको बताउदै कतिपय स्थानमा यी नायकहरुले अझै खोप लगाउन नपाएको भन्दै गुनासो गरेका छन्। ट्विट ट्रेडोसले लेखेका छन्, “स्वास्थ्यकर्मीहरु जीवन रक्षाका लागि कति टाढासम्म जाँदैछन्, के यो न्याय होला कि यस्ता हिरोहरुलाई अहिले पनि धेरै ठाउँमा कोरोना खोपबाट बञ्चित गर्नु ?” उनले थप लेखेका छन्, “यो हाम्रो शक्ति र कर्तव्य हो, भ्याक्सिन समान वितरण गर्न हामी जे पनि गर्न सक्छौं । अहिले नगरे कहिले ।” उक्त भिडियोमा स्वास्थ्यकर्मीले खोप खोलाबाट तार्न गरेको संघर्ष छ जहाँ लठ्ठीको भरमा खोप तारिएको दृश्य छ।
डेनमार्कका मीडफिल्डर एरिकसन अस्पतालबाट ‘डिस्चार्ज’
एजेन्सी । डेनमार्कका मीडफिल्डर क्रिश्चियन एरिकसन अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । उनको मुटुको शल्यक्रिया गरिएको छ । यूरो कप फुटबल २०२० अन्तगर्त गत शनिबार कोपनहेगनमा भएको फिनल्याण्डबिरुद्धको खेलमा २९ वर्षीय डेनमार्कका मीडफिल्डर एरिकसन मैदानमै ढलेका थिए । उनलाई मैदानमै हृदयघात भएको थियो । तात्कालै मैदानमा ढल्न पुगेका एरिकसनको आपातकालीन उपचार…
काठमाडौँ, ५ असार । सरकारले विदेश भ्रमणमा जानेका लागि २२ निजी अस्पतालको पीसीआर रिपोर्टलाई मान्यता दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विदेश जानेलाई पीसीआर र परिक्षण गर्ने सम्बन्धमा सबै सरकारी पीसीआर प्रयोगशाला र २२ निजी अस्पतालका प्रयोगशालामा गरिएको परिक्षण रिपोर्टलाई मान्यता दिने भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार कान्तिपुर डेन्टल अस्पताल बसुन्धरा,…
काठमाडौँ, असार ५ गते । लगातारको वर्षाका कारण सिन्धुपाल्चोकको लिपिङ पुलसँगैको सडक भाँसिदा त्रिवि शिक्षण, वीर र नर्भिक अस्पतालका लागि ल्याइएको अक्सिजन प्लान्ट तातोपानीमै रोकिएको छ । मितेरी पुलभन्दा करीब २०० मिटर तल रहेको लिपिङ पुलसँगैको सडक भासिएकाले अक्सिजन प्लान्ट बोकेको कन्टेनर काठमाडौँ ल्याउन नसकिएको आयातकर्ता विध म्यानेजमेन्टले जनाएको छ…
६० वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिलाई मात्र अस्ट्राजेनिका खोप लगाउन अस्ट्रेलियाको निर्णय
क्यान्बेरा, ३ असार । अस्ट्रेलिया सरकारले कोभिड-१९ विरुद्धको अस्ट्राजेनिका खोप ६० वर्षभन्दा माथिको उमेरका व्यक्तिलाई मात्र लगाउने जनाएको छ। यसअघि यो खोप ५० वर्षभन्दा माथिको उमेरका व्यक्तिलाई लगाउन सिफारिस गरिएको थियो। गत साता अस्ट्राजेनिका खोप लगाएकी एक ५२ वर्षीया महिलाको मस्तिष्कमा रगत जमेका कारण मृत्यु भएपछि सरकारले उमेर बढाएको हो।…
सरकारले ४० लाख मात्रा भेरोसिल खोप खरिद गर्ने
काठमाडौं,४ असार । नेपाल सरकारले भेरोसिल खोप ४० लाख खरिद गर्ने भएको छ । चीनको सिनोफर्म कम्पनीले विकास गरेको खोप सरकारले किन्ने तयारी गरेको हो। मन्त्रीपरिषद् बैठकमार्फत् कोरोना विरुद्धको खोप खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहमति दिएको छ । उक्त खोप साउन महिनाभित्रमा ल्याइसक्ने सरकारको योजना छ ।…
दिल्लीको कनोट प्लेसस्थित मरीना होटलको ठ्याक्कै अगाडि एउटा मस्जिदमा मगरिबको नमाज अर्थात् सन्ध्याकालीन प्रार्थना सुरु हुन लागेको छ। रमजानको महिना छ। केही समयपछि रोजा खोलिनेछ अर्थात् व्रत समापन गरिनेछ । मरीना होटलको एउटा कोठाबाट एक व्यक्तिले मस्जिदको चहलपहल हेरिरहेका छन् । ती व्यक्तिलाई यो कुरा थाहा छैन कि सन् १९४८…
काठमाडौं, ३१ जेठ । इंग्ल्याण्डमा चार साताका लागि लकडाउन थप गरिएको छ । आगामी साताबाट नै लकडाउन खुकुलो हुने अपेक्षा गरिए पनि चार साताका लागि लम्बिन पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएको छ । लकडाउनको क्रममा ब्यक्तिको हिंडडुल, सार्वजनिक स्थलमा भेला लगायतमा रोक लगाइएको छैन् तर क्षमता सीमित गरिएको छ । लकडाउन…
निदान अस्पतालले भन्यो: कोरोनाका नयाँ बिरामी भर्ना गर्न सक्दैनौ
ललितपुर,२७ वैशाख । अक्सिजन अभावको कारण ललितपुरस्थित निदान अस्पतालले कोभिडका थप नयाँ बिरामी भर्ना गर्न नसक्ने भएको छ। आज निदान अस्पतालले सूचना जारी गरी अक्सिजनको अभाव भएको भन्दै कोभिडका नयाँ बिरामी भर्ना गर्न नसक्ने प्रष्ट पारेको हो। हाल ५० जना कोभिडका बिरामीको उपचार गर्दै आएको भन्दै अस्पतालले सरकारले नियन्त्रित कोटामा आउने अक्सिजन आपूर्ति अपर्याप्त भएकाले बिरामी भर्ना गर्न असमर्थ भएको अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ। हाल दैनिक एक सयदेखि १३० वटा अक्सिजनको आवश्यक पर्ने गरेको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालमा रहेका ५० जना कोभिड बिरामी मध्ये २० जनाको आइसीयू र एचसीयूमा उपचार भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। अक्सिजन आपूर्ति सहज हुने बित्तिकै कोरोनाका थप बिरामी भर्ना लिने अस्पतालले जनाएको छ।
जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा तीनलाखको पिसिआर परीक्षण
हेलिकप्टरबाट मनाङको विकट नार्पाभूमिमा खोप पुग्यो
उपत्यका र तराईमा कोरोना सङ्क्रमण घट्दै, पहाडका १६ जिल्लामा बढ्दै
काठमाडौं,९ असार । बुधबार देशभर दुइ हजार ४२१ जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको १२ हजार ४१४ जनाको पिसिआर र एन्टीजेन परीक्षणमा २ हजार ४२१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार ७ हजार ४६१ जना पिअिसार…
काठमाडौँ,७ असार । मानव शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गर्न उपयोगी मानिने योग गर्न आह्वान गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदै छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् २०१४ मा गरेको निर्णयअनुसार सन् २०१५ जुन २१ देखि अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउन थालिएको हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्रदामोदरदास…
पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी ठप्प पारेपछि व्यवसायी र चालकले बुधबारदेखि खोप लगाउन पाउने
बाल लत बन्दै मोबाइल फोन, घरभित्रै अभिभावकसँग टाढिँदै सन्तान
आज बाट देशैभर कोरोना विरुद्धको खोप लगाइने
क्यान्सर रोग अध्ययन संस्थान स्थापना हुने
२८ हात्तीको कोरोना परीक्षण,रिपोर्ट आउन केही दिन लाग्ने
चेन्नई, २६ जेठ । भारतमा २८ ओटा हात्तीको कोरोनाभाइरसको परीक्षण गरिएको छ । जनावरहरुलाई पनि कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण भएको हुनसक्ने आशङ्कामा मङ्गलबार उनीहरुको कोरोना परीक्षण गरिएको हो । दक्षिण भारतको तमिलनाडु प्रदेशमा पर्ने चेन्नईमा रहेको मुडुमालै टाइगर रिसोर्टमा रहेका २८ हात्तीको कोरोना परीक्षण गरिएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । परीक्षणका लागि निकालिएको…
भेटेरिनरी एशोसिएशनको अध्यक्षमा डा. शीतलकाजी श्रेष्ठ अत्यधिक मतले विजयी
काठमाडौँ, २८ जेठ । अहिले कोरोना सङ्क्रमणबाट पूरै ठीक भए तर मानसिक तनावबाट मुक्त हुन सकेको छैन । राति निद्रा लाग्दैन । नकारात्मक सोचाइ बढी आउँछ । कसैसँग बोल्न मन लाग्दैन । रुन मन लाग्छ । एक्लै बस्दा कसैले मार्न आएको जस्तो लाग्छ” कोरोना सङ्क्रमणबाट भर्खरै मुक्त हुनुभएकी भक्तपुरकी ५५ वर्षीया…
‘अस्पतालका एक-एकलाई गिड्छु,-सबैलाई चड्कन लाउँछु’ भदै स्वास्थ्यकर्मीलाई त्रसित बनाए: भेरी अस्पताल
सिर्जनात्मक कामले हट्छ मोबाइलको लत
चिकित्सकको सुझाव: सामान्य संक्रमित घरमै बस्नुहोस, अक्सिजनको मात्रा जांचिरहनुस
प्रदेश १ ले सबैलाई खोप उपलब्ध गराउने घोषणा, ३२ अर्ब ४६ करोडको बजेट सार्वजनिक
विराटनगर,१ असार । प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ का लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपियाँको बजेट प्रदेशसभामा पेश गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले चालू तर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख रुपियाँ, पुँजीगत तर्फ १५ अर्ब पाँच करोड ३५ लाख रुपियाँ, स्थानीय तहहरुमा…
सरकारलाई १२ जना पूर्व उपकुलपतिको चेतावनीः चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेप अस्वीकार्य
चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहमा ७६ कलेजका लागि सिट संख्या निर्धारण
एक स्वास्थ्यकर्मी,एक स्वास्थ्य संस्था कार्यविधिमा नर्सलाइ विभेद
‘एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यविधि जारी
स्वास्थ्य मन्त्रीले लिएको कोरोनिल किट वितरणमा रोक
नेपालमा ३२ लाख मात्रा खोप भण्डारण गर्न सकिने
कोरोना खोपका लागि २६ खर्ब ७५ करोड बजेट
कोरोनाले आगामी तीन हप्ता नेपालको लागि अत्यन्तै कठिन: डा. पाण्डे
होम आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितलाई समस्या भएमा यी १९ जना डाक्टरलाई फोन गर्नुहोस् !
आयुर्वेद चिकित्साप्रति विश्वासः सङ्क्रमण बढेसँगै आयुर्वेदिक औषधि किन्नेको भीड
कोरोना विरुद्धको खोप अभियान अनिश्चितकालका लागि स्थगित
अस्पतालले ५० प्रतिशत बेड कोरोना उपचारका लागि छुट्याउनैपर्ने
एकै पटकमा १० सन्तानलाई जन्म
किशोरावस्थामै यौन सम्पर्क गर्ने कि विवाह पछि गर्ने ?
प्याडमा पनि कर ?
डा. अर्जुन तिवारीको टोलीले जोगायो २९ वर्षीया निर्मलाको ज्यान